Inkcazo kunye nokusetyenziswa kweLizwi lesiFrentshi elithi 'Enchanté'
Bonisa ulwazi lwakho lwesiFrentshi xa udibana nabantu abatsha
IsiFrentshi sele sinefuthe kwiilwimi zesiNgesi. Iilwimi ezimbini zikwabelana ngesalfabhethi esifanayo kunye nenani leenkcukacha eziqinileyo . Kodwa, inkolelo enkulu yesiFrentshi ngolwimi lwesiNgesi ingaba ngamagama amanani-anjenge- enchanté - adluliselwe ukusuka kwincwadi yangaphambili ukuya kulwimi olulandelayo.
Igama lesiFrentshi elithi enchanté liyisichazi , kodwa unokusebenzisa igama ukubonisa uvuyo xa udibana nomntu omtsha.
Iinkcazo: Enchanté vs. Enchant
Igama elithethileyo ngesiFrentshi lithetha ukuthakazelisa, ukuvuyisa, ukuvuyisa, ukubetha, okanye ukunqunyulwa. NgesiNgesi, igama elithi "umcebisi" lithetha ukuthintela ngentsingiselo kunye nokutshukunyiswa, ukutshintshela, ukutsala, ukunyamezela, okanye ukuvuselela ukunyaniseka.
Ukufana kwegama lesiFrentshi kunye nesiNgesi kucacile. Ukupeliswa kuyafana ngokufanayo, kodwa izivakalisi zihlukeneyo. Igama elihle libizwa [a (n) sha (n) tayle ngesiFrentshi. Akumangalisi ukuba igama lesiNgesi elithi "umcebisi" linomvelaphi ovela emva kweenkulungwane, ephuma kulo dade igama elithi enchanté ngesiFrentshi.
Umvelaphi we-Enchant and Enchant
I-Oxford Living Dictionaries ithi inqaku lesiNgesi langoku "umcebisi" ngokwenene livela kwiNgesi yesiNgesi , ulwimi oluthethwa eNgilani ukususela malunga ne-1100 ukuya ku-1500. Iintsomi zivela kwixesha lesiNgesi elisentshonalanga elithetha ukubeka ngaphantsi kwesipelo. Leli gama laye labizwa ngokuthi "incant" kwiNgesi yesiNgesi, njengento yokuthungatha.
Ngaphambi koko, igama lesiNgesi elivela kwigama lesiFrentshi, umthubi , ovela kwi-Latin incantare , elithetha "kwi" + cantere , "ukucula." Igama lesiFrentshi umthubi ngumfanekiso ongapheliyo wegama, intsingiselo yokuthakazelisa, ukuvuyela, ukuvuyisa, okanye ukutshintsha.
Imizekelo yezinto ezinobulunga
Ukuze ufumane ukuqonda okupheleleyo kwintlekele , kunokuba luncedo ukubona ukuba eli gama lisetyenziswe njani ngesiFrentshi kwaye liguqulelwe kwisiNgesi.
Ndivuyiswe yilo mdlalo.
- Voici mon frère David.
- Nguwo umntakwabo uDavide.
- Ndiyavuya ukukwazi.
Le forêt is enchantée.
Leli hlanga lihle.
Phawula indlela, kwimimiselo emibili yokuqala, igugu eliguqulelwe ngokuthi "uyonwabile" okanye "luhle" (njengokuthi "ujonge ukudibana nawe"). Igama, elihle ngokwalo liguqulela njengelungileyo kwiFrentshi. Igama elithi "elungileyo" liguqulela nje njengento enomdla kumxholo wokubonisa "ukuzonwabisa" okanye "ukukhwabanisa" xa udibana nomntu.
I-Enchanté kwiFrench Literature
Ingcamango yokuchonga inomxholo oqinile kwiincwadi zesiFrentshi. UWilliam C. Carter, encwadini yakhe, "uMarcel Proust: Ubomi," wathi umculi owaziwayo waseFransi wayehlala efuna ukuzondla abafundi bakhe:
"Izwi lakhe elikhohlisayo lifana noWalt Whitman, onomlomo kunye namazwi akhe abonakala ekhuthaza ukuba umfundi alala naye aze atshintshe i-caresses."
Oku kukubuyisela emva koko, kwintsingiselo yesantya yegama elihle , elithetha ukutshintshela okanye ukuphosa isipelo, ngokuqinisekileyo liyenza libe lixesha elihle. Ngoko, ngexesha elizayo xa ufuna igama elilungileyo xa udibana nomntu omtsha, sebenzisa i-term enchanté ukubonisa ukunwaba kwakho ekudibaneni loo mntu okanye ukuphosa isipela njengoko udweba kumfundi okanye umphulaphuli wakho.
Ukukhetha - ukhetha
Ukuguqulela iMigqaliselo ye "Abantu" ngesiJamani
Amanani omiselweyo ngesiSpanish
Imiba yokuhlala e-Hotel eItali
Indlela yokudibanisa isenzi esithi "Potere" ngesiTaliyane
Funda ukusetyenziswa kweLizwi lesiFrentshi elithi 'Même' kwisiNgesi saseFrentshi
'Tout à l'heure': Indlela yokusebenzisa le ngcaciso yesiqhelo yesiFrentshi
Yintoni i-DSW Degree?
Iimvumi ezili-10 eziphezulu zoLuthando lwaMdaniso
IYunivesithi ye-Butler GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukulungisa ngokuzenzekelayo iiTriki zokuqala
Ukwandisa iMosis Mass Mass Mass Through Volume Lower Bodybuilding Training
Iimbangela eziqhelekileyo zeTire iHumming noise kunye nendlela yokuzilungisa
Ngumdaniso Wemihla ngemihla?
7 Ubonisa Ukuba NgaRhulumente WaseGrisi Wasendulo
'I-Rolling of Thunder, Mva Ukukhala Kwam' Imibuzo
Ngaba Ufuna IsiCongo seSikolo seGreydesi kwi-Yourrapist?
Undala Kangakanani Ukuba Ufanele Udlale iPaintball?
Ukuphakama nokuwa kweNkcazo ngokuSetyenziswa
I-Plasma Definition kwiKhemistry kunye neFizikiki
Ukulinganisa Ubunzima: Iingqungquthela ezingcono
I-Biography ye-Dom Pedro I, uMlawuli oyiNtloko waseBrazil
IRambo Granny yaseMelbourne
Phezulu i-Sheena Easton Iingoma zee-80s